MM Store, Sukhumvit, Bangkok (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > ผู้รับเหมา > MM Store
พื้นอีพ็อกซี่ พียู พื้นโรงงา
P'Sri Bra - ชุดชั้นในสตรี
ยูเนี่ยนมอล์ SKY-37 ทางเชื่อมไปเซนทรัลลาดพร้าว
ประตู-กระจก งานไม้ Proudwood
104-108 ถนนบริพัตร หลังวัดสระเกศ (ภูเขาทอง)เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Myanmar & Thailand Store
ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းကျိုးမပေးလို့ အဲ့လို လုပ်ပစ်ရမယ် 🤣🤣
Photos from MM Store's post
fb မှာကျ ကိုယ့်ထက်တောင်
ဘဝရဲ့နိယာမ ၆ချက် 💪🏻❤️
မန်ယူ ပရိသတ်များ အများစု ဖြစ်ကြကြောင်း
မန်ယူအသင်း ရှုံးပြီး နောက်တစ်ရက်ဆို
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ တိုက်ပွဲများမှာ
မိမိအနေဖြင့် ဆိုးရှားကို ရာထူးမှ မထုတ်ပယ်စေလိုကြောင်း
Post Credit ပါ
ထိုင်းရောက် မြန်မာအားလုံး ပါဝင်နိုင်မယ့် ပွဲကြီး
300 Bath နဲ့ ပွဲလည်းဖြစ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ကျင်းပသော ပညာရေးရန်ပုံငွေ အွန်လိုင်း show ပွဲကြီးအတွက် လက်မှတ်များဝယ်ယူလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
အက်စတာ ဇီနော်ဗန်ဗို၊ ဒေါင်း၊ ကိုပေါက်၊
မြနှင်းရည်လွင်၊ ကိုသီဟထွန်း၊ မြတ်နိုးအေး … တို့ဖြစ်ကြပြီး
အာဇာနည်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ချမ်းချမ်း၊
ဒေးဗစ်လိုင်၊ မူးလာ၊ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း၊
နိုဗန်ထူး၊ ရီဘက်ကာ …တို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်လက်မှတ်တစောင်လျှင် 300 ဘတ်ဖြစ်ပြီး 12 ရက်နေ့နောက်ဆုံးအမှီဝယ်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်‌ဗျာ
စတိတ်ရှိူးကိုတော့ ၁၃.၁၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ခွဲ မှာ
https://unitedxyz.com/ မှာ မိမိဝယ်ထားတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပြီးဝင်ရောက် ကြည့်ရှူရမှာ
နေ့တိုင်း ကြက်ဥပြုတ် ကြက်ပြုတ်စားနေသောမိမိတို့အခြေနေ😆
ကြုံဆုံခဲ့ရင် အားပေးကြပါအုံး 😍
s"ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ အဖြစ်
New = အသစ်
News = သတင်း
Moon = လ
Moons = တနင်္လာဂြိုဟ်
Sack = ဂုန်နီအိပ်
Sacks = ငုတ်များပါသောစင်များ
Goods = ကုန်ပစ္စည်း
More = ပိုမိုသောအရာ
Mores = ထုံးတမ်းဓလေ့များ
Regular = ညီညာခြင်း
Regulars = ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်
Mee = ဆုလာဘ်
Mees = တွေ့ဆုံ
One = တစ်
Ones = တို့၊ တွေ
Eg..It is time the little ones were in bed.
Baa = သိုးအော်သံ
Baas = အလုပ်ရှင်သူဌေး
Quarter = လေးပုံ/တစ်ပုံ၊နေရာ
Date = ရက်စွဲ
Dates = စွံပလွံသီး
Gold = ရွှေ
Golds = ဂိုးတိုင်များ
Mount = တောင်ကုန်း
Mounts = ခင်းကျင်း
Dove = ချိုးငှက်
Doves = ခိုအိမ်များ
As = ကဲ့သို့သော
Ass = မြည်း
Hackney = ငှားခြင်း
Hackneys = နွားလှည်းများ
Yard = သုံးပေ၊ တစ်ကိုက်
Yards = ၀င်းခြံများ
Sage = သုခမိန် ပညာရှိ
Sages = ပင်စိမ်းများ
Pop = ဖောက်သံ
Pops = ဘိန်းပင်များ
bow = တေယာထိုးသံ
bows = ကြိုးထုံးများ
Fire = မီးတောက်။ မီးလောင်ခြင်း
Fires = ပိုးစုန်းကြူးများ
Issue = နိဂုံး
Issues = ငြင်းချက်များ
Mean = ရည်ရွယ်သည် ဆိုလိုသည်
Means = နည်းလမ်း။ ငွေကြေးဥစ္စာ
airs =ဟန်ပန် အမူအရာ
Bus = ဘတ်စ်ကား
Buss = အနမ်း/ဒတ်ခ်ျငါးဖမ်းလှေငယ်
Pus = ပြည်
The bandage was soaked in blood and pus.
Puss = အိမ်မွေးကြောင်
nut = အခြံမာသီး
custom =ဓလေ့။ ထုံးတမ်း။ ထုံးစံ။ အလေ့အထ။
leave =ထွက်ခွါသည် / ချန်ထားသည်။
accommodations =နေစရာ ရံဖန်ရံခါစားသောက်ရေးအပါအဝင်
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဦးစားပေးနေမှု့ကြီး 😃😃😃😃😃
မီဖုန်းmodel နှင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံပို့လာရမည်ရှင့်
👉ဘဝအတွက် ခွန်အားဖြစ်နိူင်ပါစေ 👈
၁။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့သာ -
၂။ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားပါ !!
ဒါပေမယ့် သေးသေးလေးကနေ စပြီး -
၃။ စိတ်အားထက်သန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါ !
တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါ !!
၄။ ဖန်တီးနိူင်စွမ်းတွေ တိုးတက်လာအောင် -
အမြဲကြိုးစားလေ့ကျင့် သင်ယူပါ !!
၅။ သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် -
စာအုပ်ကောင်းတွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ !!
၆။ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ !
အမှားတွေ လုပ်မိမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ !!
၇။ နားထောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်နေပါ !
ကောင်းကောင်း နားထောင်ပေးခြင်းက ၊
သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ် !!
၈။ အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ !
အရင်က ဘာကြောင့်ကျရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲ -
၉။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းပြီး၊
ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်တတ်အောင် ကြိုးစားတတ်ပါစေ !!
၁၀။ တတ်ထားတဲ့ အသိပညာတွေကို -
အခြားသူတွေဆီ မျှသေင်ကြားပေးပါ !
အခြားသူကို မျှဝေရင်း ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလဲ -
ပြန်လည်လေ့လာပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ် !!!
how I make resin shaker charms ☁️ | watch me resin
how I make resin shaker charms ☁️ | watch me resin → this wasahighly requested video HAHAHthis isn't the most beginner friendly tutorial since I didnt explainalot of things and it's more of just how I wou...
Handmade Cosmetic Coming soon
♣ အမေရီကန်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများ
Moderna ကာကွယ်ဆေးဟာ Vanderbilt University က ၉၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီဆေးက လောလောဆယ် ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်
Moderna ထက်တစ်ပတ်စောကာ ကြေညာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး COVID ကာကွယ်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ Pfizer ကာကွယ်ဆေးကတော့ Modernaထက် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်လျော့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ( ၈၁.၈ - ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း)
ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေ ခံစားရလေ့ရှိလဲ?
Pfizer နဲ့ Moderna က ဒုတိယ အလုံးထိုးပြီးရင်ပိုဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ် ။ ထိုးတဲ့နေရာမှာ နာတာ နုံးတာ ခေါင်းကိုက် ကြွက်သားနာတာတွေက အဖြစ်များပါတယ် ။ ရှားရှားပါပါး နှလုံးကြွက်သားရောင်တာ နှလုံးအမြှေးရောင်တာကို Pfizer နဲ့ Moderna မှာတွေ့ရပါတယ်
♣ အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများ
ဗြိတိန် နည်းပညာကို အိန္ဒိယ မှာ ထုတ်ခွင့်ပေးတာပါ ။ ဗြိတိန် မှာထုတ်တာကိုတော့ AstraZeneca နာမည်ပေးထားပါတယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဇန်နဝါရီလကတည်းက Covishield ကာကွယ်ဆေးကို စတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကို နှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့ လူဦးရေတစ်သန်းခွဲစာကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မတိုင်ခင် ဇွန်လအထိ ထိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒီ Covishield ကာကွယ်ဆေးဟာ သက်တမ်းခြောက်လသာ ရှိပါတယ်)
ဒီဆေးကို ပထမတစ်ကြိမ်ထိုးထားရင် ရောဂါမဖြစ်အောင် ၇၀.၄ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးပြီးချိန်မှာတော့ ၈၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနှုန်းကို အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်အရွယ်တွေမှာ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဆေးထိုးထားသူတွေက မိမိမှတစ်ဆင့် တခြားသူကို ရောဂါပြန်ဖြန့်နိုင်နှုန်း ၆၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ အပြင်ဆေးခန်းတချို့မှာ ထိုးပေးနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Covaxin အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုတော့ BBV152 လို့လည်း သိကြပြီး သေဆုံးနေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပြုပြင်ကာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ သူက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်ရင် antibody တွေ ထွက်လာပြီး ခုခံအားစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ကာ ရောဂါကို တိုက်ထုတ်ပစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒီဆေးက အိန္ဒိယ နိုင်ငံအပြင် အီရန်၊ မက္ကဆီကို၊ နီပေါ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပါရာဂွေး၊ ဇင်ဘာဘွေနဲ့ မောရစ်ရှားနိုင် ငံတွေမှာပါ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ် ၄-၆ ပတ်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ် ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုး ပြီးရင် ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အဖျား ရှိတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ စိတ်တိုတာ၊ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ ရောင်ရမ်းပြီး နာကျင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး ပါရာစီတမောလို မျိုး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို သောက်ထားသင့်ပါတယ်။
ဆေးနဲ့ ပြင်းထန်ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တာကတော့ အလွန်ရှားပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ရင် လည်ချောင်းရောင်ရမ်းပြီး အသက်ရှူမ၀တာ၊ ပျို့တာ၊ အန်တာ၊ အဖုအပိမ့်ပေါက်တာ၊ အဖျားရှိတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခန်္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုက်ခဲတာနဲ့ ဆေးထိုးထားတဲ့လက်တစ်ဖက် တောင့်တင်းနေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သွေးယိုစီးမှုပြဿနာရှိသူတွေ၊ ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်တွေ ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်မိခင်တွေက ဒီကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။
♣ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများ
တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေး တွေဖြစ်တဲ့ Sinopharm ကို WHOက ယခုနှစ် မေလအတွင်း အရေးပေါ်အသုံး ပြုခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီး Sinovac ကို ဇွန်လမှာ ခွင့်ပြုထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကို လက်ရှိမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော် အသုံးပြုနေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးစလုံး ကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ က တခြားကာကွယ်ဆေးတွေလောက် အဖြစ်မများဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဆေး ထိုးတဲ့နေရာမှာ နာကျင်တာ၊ ပင်ပန်းနွမ်း နယ်တာ၊ ၀မ်းပျက်တာနဲ့ ကြွက်သားနာ ကျင်တာလောက်သာဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်အ တွင်း ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါ တယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးက တရုတ်နိုင်ငံက ဒီနိုင်ငံကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ကာကွယ် ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ကုန်သည် များအသင်းချုပ်ကလည်း အသင်း၀င် တွေကို ဒီဆေးထိုးပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးက SARS-CoV-2 ကို Beta-propiolactone ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ ကုသမှုပြုလုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဓာတုပစ္စည်းက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပေါင်းပြီး COVID-19 ဖြစ် စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပွားများမှုကို ရပ်တန့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူ့မှာ ပါ၀င်တဲ့ အလူမီနီယမ်ဟိုက်ဒရော ဆိုက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်က ပိုမိုမြင့်တက်လာပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ရှိသူတွေ ထိုးဖို့သတ်မှတ်ပေးထားပြီး တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြား သုံးပတ်ကနေ လေးပတ် ခြားကာ နှစ်ကြိမ်စီ ထိုးပေးရမှာဖြစ်ကာ ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းမှာ ၇၉.၃ ရာ ခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဆေး ကို ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင် တွေအတွက် ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးမှာပါတဲ့ ပါ၀င် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ဖူးသူ၊ အပူချိန် ၃၈.၅ ဒီဂရီထက် မြင့်မားသူ တွေက ဒီဆေးကို မထိုးသင့်ပါဘူး။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ကာ ကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာကျင်တာ၊ အဖျားရှိတာတွေအပြင် ခေါင်းကိုက်တာ နဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါ တယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးက ယခုလအတွင်း တစ်သန်းရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အသက် ကြီးသူ၊ ရောဂါအခံရှိသူ၊ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးတဲ့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမရေးစောင့်ရှောက်မှုပေး နေသူတွေကို ဦးစားပေးထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဆေးက ဓာတ်ခွဲခန်းကနေ ထုတ် လုပ်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားနဲ့ ပြု လုပ်ထားတဲ့ Inactivated Virus Vaccine အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမှာ ပါ၀င်တဲ့ များစွာသော ပရိုတင်းတွေကို ခုခံအားနစ်က တုံ့ပြန်ပြီး ကိုဗစ်ရောဂါကို တိုက်ထုတ်မယ့် Antibody တွေထွက်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ရှိ သူ၊ နို့တိုက်မိခင်၊ ကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့် မားတဲ့ အ၀လွန်သူ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါရှိသူနဲ့ အဆုတ်ရောဂါရှိသူတွေထိုးဖို့ သတ်မှတ်ထားပြီး တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ် ကြား ၂-၄ ပတ်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းက နိုင်ငံအ ပေါ်လိုက်ပြီး ၄၉.၆ - ၅၀.၇ % ရှိကာ ကိုဗစ် ဆိုး ဆိုးရွားရွား အခြေအနေမရောက်အောင် ၈၅-၁၀၀ %၊ ကိုဗစ်ကြောင့် ဆေးရုံတက် ရတာမျိုးမဖြစ်အောင် ၈၀-၁၀၀ % ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ ကာကွယ် ဆေး နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Sputnik V နဲ့ Sputnik Light တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအ တွက် ခုနစ်သန်း၀ယ်ဖို့ မှာယူထားကာ မကြာမီ အလုံးရေ နှစ်သန်းရောက်ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးက တုပ် ကွေးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ Adenovirus အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကို ရောဂါသယ်ဆောင် တဲ့အနေနဲ့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါသယ်ဆောင်တဲ့ဗိုင်း ရပ်စ်တွေက ပြုပြင်ထားတာကြောင့် ခန်္ဓာ ကိုယ်ထဲမှာ ပိုးထပ်မံပွားများတာ၊ ရောဂါ ဖြစ်တာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။
ဒီဆေးကို အိန်္ဒိယ၊ အာဂျင်တီးနား၊ မွန်တီနီဂရိုး၊ ရုရှား၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ဘီလာ ရုစ်၊ ဆားဗီးယား၊ ယူအေအီးနဲ့ Europe တိုင်းပြည်ထဲက ဟန်ဂေရီအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၆၄ နိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေကြ ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ရှိသူတွေ ထိုးနိုင်ပြီး ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းက ၉၁.၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိကာ ကာကွယ် ပထမအကြိမ်ထိုးပြီး သုံးပတ်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံထိုးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
◘ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်တာ ၇၀ %
◘ အဆစ်နာတာ ၄၆.၄ %
◘ ခေါင်းကိုက်တာ ၆၄.၇ %
◘ ကြွက်သားနာကျင်တာ ၆၁.၅ %
◘ ချမ်းတုန်တာ ၄၅.၄ %
◘ အဖျားရှိတာ ၁၅.၅ %
◘ ပျို့အန်တာ ၂၃ % ရှိပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးက COVID-19 ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခုခံအားတည်ဆောက် ပေးတာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ၇၉.၄ ရာခိုင် နှုန်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူရဲ့ အား သာချက်က ဆေးတစ်ကြိမ်သာ ထိုးရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးထိုးအပြီး လေးပတ်အကြာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အားပျော့စေတဲ့ anti-body ထွက်လာနိုင်နှုန်း ၉၁.၆၇ ရာခိုင် နှုန်းအထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ယခုနှစ် မေလအတွင်း က အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို ရုရှား၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ အင်ဂိုရာ၊ ဘာရိန်း၊ နီကာရဂူး၊ မောလစ်ရှ၊ ပါလက်စတိုင်း၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဘီလာ ရုစ်၊ ကွန်ဂို၊ မွန်ဂိုလီးယား တောင်ကိုရီး ယားအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ နိုင်ငံမှာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
IT.Tank พ็อกเก็ตเทปูน กรวยเทปูน ถ
242 ถ.บางบอน5แขวงบางบอน เขตบางบอน
จำหน่ายอุปกรณ์มือถือ กระจกนิรภัย แบตสำรอง ตัวแทน Geniues Gadget และ ฟิล์มนิรภัย X-ONE
Nutnicha 2014 Engineering And Construction Company Limited
รีสอร์ท ทีพัก พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว รีสอร์ทแบบบ้านๆ ธรรมชาติ
บริการพิมพ์อิงค์เจ็ท พิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา Roll Up งานคุณภาพโดยมืออาชีพ
1/118 หมู่5ซ.สุขสวัสดิ์2จอมทอง
เรามีผ้าดิบชนิดต่าง ๆ เช่น9ปอนด์, 12 ปอนด์, 15 ปอนด์มีความกว้างขนาด 47", 56" และ 62" ค่ะ
249/32 Soi Watpradunaisongthum ,Wat Thapra ,Bangkokyai ,Bangkok